Fampiharana Android tsara indrindra hamerenana ireo rakitra voafafa | Androidsis
Fampiharana Android hamerenana ireo rakitra voafafa
Zavatra efa nitranga tamin'ny mpampiasa mihoatra ny iray indraindray dia voafafa tsy nahy ny rakitra iray. Fahadisoana dia namafa sary, horonantsary na antontan-taratasy tsy tianay hamafa tamin'ny finday Android izahay. Manelingelina izany amin'ny tenany, indrindra raha tsy manana kopian'ny rakitra voalaza isika. Zavatra mitranga matetika. Io no manomboka miahiahy ny mpampiasa maro.
Inona no hatao amin'ireo karazana toe-javatra ireo? Afaka mampiasa fampiharana foana isika. Manana rindranasa marobe ao amin'ny Android izahay izay mamela anay hamerina rakitra voafafa. Amin'izany fomba izany, raha sendra mamafa zavatra tsy nahy isika, dia afaka mamerina io rakitra io.
Noho izany, asehonay etsy ambany ny safidin'ireo fampiharana izay azonay atao ampidino mba hamerenana ireo rakitra izay nofafantsika tamin'ny finday Android. Ka raha tsy manana kopian'ny fisie io isika dia mbola afaka mamonjy azy ihany. Na dia, toy ny tolo-kevitra aza dia zava-dehibe ary atolotra izany andao hanao kopia backup. Satria amin'izany fomba izany dia afaka misoroka olana maro isika. Satria raha fisie nesorinay efa ela izy io dia tsy avo ny vintana hanarenana azy.
Miatrika rindranasa iray izay tena malaza eo amin'ireo mpampiasa Android izahay. Iray amin'ireo fantatra indrindra ao anatin'ny sokajy misy azy io. Ny iray amin'ireo tombony lehibe dia satria mora ampiasaina ilay application. fotsiny tsy maintsy mihazakazaka famakafakana izahay ary milaza aminao izay tadiavinay. Ilaina indrindra amin'ny fikarohana sary voafafa. Ny fampiharana dia tompon'andraikitra amin'ny famakafakana ny fitehirizana anatiny ny finday. Rehefa tapitra ny fanadihadiana asehony anao ny zavatra hitany ary mila misafidy fotsiny ianao inona ny sary tianao ho sitrana.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ho fanampin'izany, ao anatinay dia tsy mahita fividianana na dokam-barotra isan-karazany.
DiskDigger dia mahazo sary
Faharoa, mahita iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra amin'ity karazana ity amin'ny Android izahay. Mety ny safidy feno indrindra misy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny sokajy. Izy io dia rindrambaiko ahafahantsika mamerina rakitra, toy ny sary na horonan-tsary, amin'ny fomba tena tsotra sy mahomby. Na izany aza, misy fatiantoka lehibe ihany koa io. Satria tsy maintsy apetrakao izy io amin'ny fotoana hamafana fisie amin'ny fitaovana. Satria miasa toy ny fitoeram-bokatra azo ampiasaina amin'ny finday izy io. Noho izany, safidy tsara ny dinihina, satria izay rehetra hofafantsika dia hiafara amin'izany.
Ity rindranasa fahatelo ity dia iray amin'ireo zavatra maro samihafa izay hitantsika ao anatin'ilay lisitra. Manao majika tena izy raha ny amin'ny fanarenana rakitra, satria fitaovana tena mandaitra. Ho fanampin'izany, tsy maintsy lazaina fa miasa amin'ny karazana rakitra fisie rehetra. Ka, Mety ho an'ny toe-javatra isan-karazany izany, na inona na inona telefaona anananao na ny karazana rakitra voafafa. Izy io dia manao scan disk iray tena lalina mba hamerenana angona avy amin'ny fahatsiarovana anaty. Ny fiasan'ny fampiharana dia tena tsotra sy intuitive. Ka afaka mankafy azy ny mpampiasa rehetra.
Undeleter: mamafa ny rakitra
Fampiharana iray hafa izay matoky ny mpampiasa maro. Izy io dia iray amin'ireo rindranasa tsotra indrindra izay mety ho hitantsika amin'ity karazana fampiharana ity. Izy io dia manana interface interface lehibe, ho an'ny mpampiasa sasany dia fototra loatra io, fa manao ny asany tanteraka. Ny fampiharana dia tompon'andraikitra amin'ny famakafakana ilay fitaovana amin'ny fikarohana ireo rakitra izay tadiavinay. Raha vantany vao vita dia mampiseho amintsika ny valiny hita izany ary mifidy izay tiana ho sitrana izahay. Tsotra nefa tena mandaitra amin'ny asany.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia ao aza dia mahita doka. Tokony holazaina fa ny doka dia mety ho manelingelina indrindra indraindray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana Android hamerenana ireo rakitra voafafa
Afaka manampy ahy hamerina ny horonantsary nofafako izy ireo
Ny BlackBerry Motion dia efa misy any Espana
Ny famaritana isan-karazany momba ny Samsung Galaxy J4 dia mivoaka ao amin'ny GeekBench